इटहरी उपमहानगरको गहना ताल तलैयामाःएकै दिनमा एकसय पैसठ्ठी वनभोज टोली » Purbihotline
मनोरञ्जन मुख्य समाचार समाचार
इटहरी । गत शुक्रबार वेलुका सात वजे वेगनास युवा क्लव पोखराको पिकनिक टोली इटहरीको तालतलैया आइपुग्यो । वेलुका तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिले त्यति टाढावाट आएका टोलीलाई स्वागत ग ¥यो । शनिवार वनभोज खाएर पोखराको टोली फर्कियो । त्यो शनिवार तालतलैयामा १ सय ३५ टोली वनभोज खान आएका थिए ।
सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, इलाम लगायत एक नम्वर प्रदेशका बिभिन्न जिल्ला वाट त आउनेनै भए, पोखरा, धादिड, काठमाडौ, सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका टाढा टाढाका ठाँउवाट पनि वनभोजका लागि तालतलैया आउनेहरुको संख्या दिनदिनै वढ्दो छ ।
“शनिवार र विदाका दिनमा त तालतलैयामा ठूलै मेला लागेजस्तै हुन्छ” तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर लिम्वू भन्नुहुन्छ “आइसक्रिम पार्लर सहित गरेर एकै दिनमा गत शनिवार ३ लाख ५१ हजार रुपिया आम्दानी भएको छ ।” गत बर्ष तालतलैयाको आन्तरिक आम्दानी ६० लाख वढि थियो । पिकनिकको सिजनमा प्रत्येक शनिवार र विदाका दिन १० हजार भन्दा कम कुनै दिन पनि नहुने प्रचार उपसमिति संयोजक लोचन पौडेलको दावी छ ।
७६.७५ हेक्टरमा फैलिएको तालतलैया क्षेत्र मनोहक जंगली वातावरण भएको ठाँउ हो । अनेक तालतलैया रहेको यो क्षेत्रको २१. ५ हेक्टरमा अहिले संरक्षण र प्रवद्र्धनको काम भएको छ । फराकिलो र रमाइलो ठाँउ भएका कारण टाढा टाढावाट वनभोज खान आउनेहरुको क्रम वढेको संचार उपसमिति संयोजक पौडेलको भनाई छ ।
गत बर्ष ४ लाख, एकैदिनमा १ सय ६५ टोली
गत बर्ष ४ लाख वढि पर्यटक तालतलैया आएको तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिले जनाएको छ । गत बर्ष ९० हजार ब्यक्ति त टिकट काटेर घुम्न मात्र आएका थिए, वनभोज खान आउनेहरुको संख्या समेत जोड्दा चार लाख वढि आन्तरिक तथा वाहय पर्यटक तालतलैया आएको अध्यक्ष लिम्व्ूाले वताउनुभयो । पोहोर साल वनभोजको सिजनमा एकै दिन १ सय ६५ टोलीसम्म वनभोजका लागि आएका थिए । दुई सय टोली सम्मलाई वनभोजका लागि एडजष्ट गर्न सकिने उहाँले वताउनुभयो । यो बर्ष वनभोज गर्न आउने टोलीको संख्या गत बर्षको भन्दा वढ्ने समितिको अपेक्षा छ ।
उत्कृष्ठ सय नयाँ गन्तब्यमा परेको पर्यटकीय स्थल तालतलैयामा के छ ?
तालतलैया, सरकारले गरेको उत्कृष्ठ सय नयाँ गन्तब्यमा सुचिकृत स्थल हो । इटहरी चौक पूर्व राजमार्गवाट ५ किलोमिटर उत्तर लागेपछि तालतलैया पुग्न सकिन्छ । प्राकृतिक रुपमानै ताल, पोखरी, सिमसार, खोल्साखोल्सी, थुम्कैला डाडापाखा, समतल घाँसेमैदान, विभिन्न प्रकारका रैथाने वोटविरुवा, जडिवुटि, पशुपंक्षि, जलचर, उभयचर रहेको ठाँउ हो तालतलैया । तालतलैयाको आकर्षक प्रवेशद्धारवाट प्रवेश गरेपछि आकर्षक पानीको फोहोरा सहितको फलामे पुल पार गरेर अघि वढदा तपाईलाई निक्कै आनन्द महशुष हुन्छ । अगाढी वढेपछि वालमैत्री पार्क छ । जहाँ बालबालिकाले मात्र होइन सवै उमेर समूहकाले खेल्ने रमाउने भरपूर मनोरञ्जनका साधन छन् । विभिन्न वन्य जन्तु संरक्षण गरेर राखिएको ठाँउ पनि त्यहि छ । त्यहि छेउको आकर्षक पोखरीमा मोटरवोट चढेर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ । तालतलैयमाका अन्य पोखरीहरुमा वोट र जलपरि रिक्सामा सयर गर्न पाउनुहुने छ । घोडामा सवारी गर्ने सुविधा छ । वुद्धमुर्ती, गणेश मन्दिर, वनकाली मन्दिर, वुढासुव्वा, लक्ष्मीनारायण त्यहि छन् । फुटवलका लागि खेलमैदान छ । खानेपानी र विद्युतको उचित ब्यवस्था गरिएको छ । फुटपाथ, कटेज र शौचालयको राम्रो प्रवन्ध छ । सिमसार क्षेत्रवरिपरि सुरक्षित तारजाली गरिएको छ । पर्यटकहरुलाई आराम गर्ने वेञ्चहरु, फिसिड पोण्ड र आकर्षक मूर्ति स्तम्भ वनाइएको छ । हरित नगरि इटहरीको गहनाको रुपमा रहेको तालतलैयाको आकर्षक मनोहक हरियाली वातावरणले तपाईलाई आनन्दित वनाउछ । बिभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारले ठूल ठूला ढुँगामा कुदेर वनाएका कलाकृति अघि तपाई सेल्फी नहानी रहनै सक्नुहुन्न । ठाँउ ठाँउमा चिटिक्क परेका वस्ने ठाँउहरु वनाइएका छन् । डेटिङ गर्न आउनेहरुका लागि पनि उत्कृष्ठ ठाँउ छ तालतलैया ।
← नेतृत्व सङ्कट र विप्लवको उदय
बन्ला महासमिति–ऊर्जा र भरोसा ? →